Liiska Dugsiyada Ivy League ee leh Kharashkooda Hadda 2022
Liiska Dugsiyada Ivy League ee leh Kharashkooda Hadda
Liiska dugsiyada ivy league ayaa halkan looga hadlay, dugsiyadan waxaa si weyn loogu yaqaanaa qaar ka mid ah kuwa ugu wanaagsan adduunka iyo sida ay ugu tartamayaan codsadeyaasha doonaya gelitaanka.
Dugsiyada Ivy League aad bay caan u yihiin, xataa kuwa aan deganayn Maraykanka way yaqaaniin dugsiyadan iyo sida ay ugu adag tahay inay galaan . Waa machadyo caan ka ah adduunka oo aad u baratan oo leh heerar ogolaansho hooseeya iyo shuruudo adag.
Heerka oggolaanshaha ee dugsiyada Ivy League waa kan ugu hooseeya adduunka waxaana ardayda laga rabaa inay maraan hab xulasho adag kahor intaan la aqbalin. Waxa kaliya oo ay aqbalaan kan ugu fiican oo ay la mid yihiin sida qaaliga ah, haddii aysan ahayn kuwa ugu qaalisan adduunka.
Dugsiyadan ayaa si wada jir ah u soo saaray qaar ka mid ah dadka ugu caansan adduunka oo ay ku jiraan madaxweynayaal badan oo Maraykan ah sida Franklin D. Roosevelt iyo Barack Obama, dad caan ah, ku guulaystay abaalmarinta Nobel-ka, dhakhaatiir iyo injineero caan ah, iyo qaar kale oo badan.
Waxaa suurtogal ah in aad maqashay wax ku saabsan dugsiyada Ivy League oo aadan xitaa garanayn waxa loola jeedo ama dugsiyada ay ka kooban yihiin. Aynu eegno waxa ay ka dhigan tahay, dugsiyada ay ka kooban yihiin, shuruudaha gelitaanka mid, iyo celceliska kharashka lagu tago dugsiga Ivy League.
1 Maxay yihiin Ivy League Schools
2 Yaa dhigan kara Dugsiga Ivy League?
3 Celceliska Qiimaha Aadida Dugsiga Ivy League
4 Shuruudaha lagu galo Dugsiga Ivy League
5 Liiska Dugsiyada Ivy League ee leh Kharashkooda Hadda
5.1 1. Harvard University
5.4 4. Jaamacadda Cornell
5.5 5. Jaamacadda Princeton
5.6 6. Jaamacadda Pennsylvania (UPenn)
Maxay yihiin Ivy League Schools
Dugsiyada Ivy League waa kelmad loo isticmaalo in si wada jir ah loogu tixraaco siddeedda kulliyadood ee ugu caansan uguna caansan Maraykanka. Dugsiyadan ayaa kala ah;
Dugsiyadan waxa loo qaybiyey sidii kulliyado heersare ah oo leh macnayaal heer sare ah oo tacliimeed, xulashada gelitaanka, iyo wacyigelinta bulshada.
Yaa dhigan kara Dugsiga Ivy League?
Dadka dhigan kara mid ka mid ah dugsiyada Ivy League waa codsade awood u leh inay buuxiyaan shuruudaha adag ee gelitaanka oo ay gudbaan shuruudaha u-qalmitaanka. Sidoo kale waa dugsiga ay wax ku bartaan dadka aqoonta u leh.
Celceliska Qiimaha Aadida Dugsiga Ivy League
Celceliska qiimaha lagu aado dugsiga Ivy League waa inta u dhaxaysa $56,746 iyo $78,417.
Shuruudaha lagu galo Dugsiga Ivy League
Sida aan kor ku sheegay, shuruudaha lagu gelayo dugsiga Ivy League waa adag yihiin, habka xulashada waa adag yahay, iyo heerka aqbalaadda waa hooseeyaa. Sidaa darteed, waa inaad haysataa natiijo aad u fiican si loogu tixgeliyo gelitaanka.
Si kastaba ha ahaatee, hoos waxaa ku qoran liiska shuruudaha si aad u ogaan karto haddii aad fursad u taagan tahay.
Dhibcaha ugu yar ee SAT ee 1590 ama dhibcaha ACT ee 35
Ku dadaal inaad haysato GPA ah 4.0 ama wax u dhow laakiin ma jirto dammaanad qaad ah in laguu diidi doono haddii aad haysato wax ka hooseeya.
Ka qaybgal waxqabadyada manhajka ka baxsan iyo ballan-qaadyada kale ee dugsiga ka dib
Qoraallada tacliimeed ee dugsiga sare
Tani waa halka aan ku bixinno faahfaahinta dhammaan 8-da liis ee dugsiyada Ivy League, kharashaadkooda hadda, iyo xiriiriyeyaasha kala duwan si aan wax badan uga ogaanno dugsiga.
1. Jaamacadda Harvard
Liiskayaga ugu horreeya ee dugsiyada Ivy League waxaa ku jira Jaamacadda Harvard, oo ah xarun cilmi baaris gaar ah oo la aasaasay 1636 kuna taal Cambridge, Massachusetts, USA. Waa machad sare ee ugu da'da weyn iyo mid ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan Mareykanka iyo iskuullada adduunka oo dhan. Waa machad u heellan heerka sare ee waxbaridda, barashada, iyo cilmi-baarista si loo sameeyo isbeddel caalami ah.
Jaamacadda Harvard waxay ka kooban tahay Harvard College oo loogu talagalay daraasaadka shahaadada koowaad, 12 qalin-jabin iyo dugsiyo xirfad leh, iyo Harvard Radcliffe Institute. Iyada oo loo marayo kulliyadda iyo dugsiyada, in ka badan 50 shahaadada jaamacadeed, 134 shahaadooyin qalin-jabin ah, iyo 32 shahaadooyin xirfadeed ayaa la bixiyaa. Kharashka waxbarashada hadda waa $51,925 sanadkii.
2. Jaamacadda Yale
Yale waa jaamacad cilmi baaris gaar loo leeyahay oo ku taal New Haven, Connecticut, US. Waxaa la aasaasay 1701 waana jaamacadda saddexaad ee ugu da'da weyn Mareykanka waana mid ka mid ah machadyada tacliinta sare ee ugu wanaagsan adduunka. Liiska dugsiyada Ivy League, waxaa lagu qiimeeyay "ugu xulashada" gelitaanka shahaadada koowaad ee jaamacadda oo leh heerka aqbalaadda 4.62%.
In ka badan 100 waaxood iyo barnaamijyo kala duwan oo noocyo kala duwan ah ayaa la siiyaa ardayda soo gelaysa shahaadada koowaad ee jaamacadda iyo qalinjabinta iyo daraasadda xirfadda. Waxyaalaha kale waxaa ka mid ah fadhiyada xagaaga, waxbarashada caalamiga ah, bixinta shahaadada, iyo barashada internetka. Kharashka waxbaridda ee Jaamacadda Yale waa $55,500 sanadkii laakiin qiyaastii 50% ardaygu wuxuu helaa nooc ka mid ah kaalmada dhaqaale.
3. Jaamacadda Columbia
Jaamacadda Columbia waa mid ka mid ah jaamacadaha ivy league. Waa machad cilmi-baaris gaar ah oo tacliinta sare ah oo la aasaasay 1754 oo ku taal magaalada New York. Waxay u qaybsantaa Koleejka Columbia, Columbia Engineering, iyo 14 dugsiyo kale oo ay ku jiraan dugsiyo qalin-jabin iyo daraasaadka xirfadeed. Kulliyada Dhakhaatiirta iyo Dhakhaatiirta Adduunka ee Vagelos ee caanka ah waa mid ka mid ah kulliyadaheeda tacliinta.
Ardayda caalamiga ah waxay codsan karaan gelitaanka Jaamacadda Columbia barnaamij kasta oo ay doortaan laakiin waa inay maskaxda ku hayaan in waxbarashadu aad u sarreeyso. Kaalmada maaliyadeed ayaa loo heli karaa ardayda gudaha, ardayda caalamiga ah waxay sidoo kale u qalmi karaan qaar haddii ay buuxiyaan shuruudaha. Kharashka waxbarashada hadda waa $61,788.
4. Jaamacadda Cornell
Liiska afraad ee dugsiyada Ivy League waa Jaamacadda Cornell, waa jaamacad cilmi-baaris oo si gaar ah loo leeyahay oo ku taal Ithaca, New York, Mareykanka. Sida mid ka mid ah koleejyada Ivy League, waxaa si joogto ah loogu qiimeeyay mid ka mid ah kuwa ugu fiican adduunka oo qaar badan oo ka mid ah barnaamijyadeeda ayaa ah kuwa ugu sarreeya. Iyada oo loo marayo barnaamijyadan, jaamacaddu waxay siisaa waxbarasho gaar ah ardayda shahaadada koowaad ee jaamacadda iyo kuwa qalin-jabiyey iyo ardayda xirfadleyda ah.
Heerka aqbalaadda ee Jaamacadda Cornell waa 10.6%, waxaad u taagan tahay fursad sare oo aad ku gasho kan marka loo eego Yale. Haddii aad haysato buundada SAT ee 1550 ama ugu yaraan dhibcaha ACT ee 34 ama ka sareeya oo leh 3.9 GPA, markaa fursadaha ayaa ah in lagu dhigo. Kharashka waxbarashada ee Cornell waa $57,222 sanadkii iyo gargaar dhaqaale ayaa diyaar u ah ardayda muujisa baahida dhaqaale.
5. Jaamacadda Princeton
Waxay ku taal New Jersey oo la aasaasay 1746, Jaamacadda Princeton waxay ku jirtaa liiska dugsiyada Ivy League. Waxbarashada shahaadada koowaad iyo kan qalinjabinta waxaa lagu bixiyaa cilmiga aadanaha, injineernimada, cilmiga dabiiciga, iyo cilmiga bulshada in ka badan 8,000 oo arday. Barnaamijyada shahaadada koowaad ee halkan waxay u horseedaan Bachelor of Arts (AB) iyo Bachelor of Science in Engineering (BSE).
Barnaamijyada qalin-jabinta iyo kuwa xirfadda leh waxaa la bixiyaa iyada oo loo marayo dugsiyadeeda ka dambeeya, oo bixiya shahaadooyin 42 waaxyo iyo barnaamijyo tacliin ah. Darajooyinka wadajirka ah ayaa sidoo kale la heli karaa. Iyada oo loo marayo cilmi-baarista iyo baridda ka timaada barnaamijyadan kala duwan ee kala duwan, Princeton waxay wax ku barataa dadka wax ku biirin doona bulshada iyo horumarinta aqoonta wax ka bedeli doonta adduunka oo dhan. Kharashka waxbarashadu waa $52,800.
6. Jaamacadda Pennsylvania (UPenn)
Jaamacadda Pennsylvania waxay ku taal Philadelphia, Pennsylvania, United, waxayna ku jirtaa liiska dugsiyada Ivy League ee la asaasay 1740. Waxaa jira in ka badan 90 majaajilood oo lagu bixiyo afarta dugsi ee ardayda heerka koowaad ah si ay u sii wataan. Ardayda qalin jebisay ee Penn waxay sidoo kale raacaan barnaamijyo xirfadeed oo kala duwan oo dhan 12 dugsiyo qalin jabiyay.
Heerka gelitaanka waa 9% iyo barashada internetka iyo barnaamijyada xagaaga ayaa sidoo kale la bixiyaa ardayda caalamiga ah waa lagu soo dhaweynayaa inay codsadaan. UPenn waxay siisaa ardayda fursado kaalmo dhaqaale iyadoo ay ugu wacan tahay sida ay uga go'an tahay inay ka dhigto waxbarashadeeda heerka caalami ee ay heli karaan ardayda ugu fiican uguna cadcad, iyadoon loo eegin xaaladooda dhaqaale. Kharashka waxbarashada ee UPenn waa $57,770 sanadkii.
7. Kulliyadda Dartmouth
Kulliyadda Dartmouth waxay ku jirtaa liiska dugsiyada Ivy League, waxay ku taal miyiga magaalada Hanover, New Hampshire, Mareykanka. Waa jawi firfircoon, loo dhan yahay oo wax barasho halkaas oo ardayda iyo macallimiinta ay kaga jawaabaan cilmi baaris iyo hal-abuur si ay u xalliyaan arrimaha kakan ee nolosha dhabta ah. Ardeyda ugu rajada wanaagsan halkan ayey wax ku barteen waxayna u diyaar garoobeen in ay noloshooda oo dhan wax barasho iyo hoggaan xilkasnimo leh ka helaan macalimiin u heellan baridda iyo abuurista aqoonta.
Barnaamijyo heer jaamacadeed iyo qalinjabin oo kala duwan ayaa diyaar u ah ardaydu inay ka doortaan ama naqshadeeyaan barnaamijkooda. Deeq waxbarasho iyo noocyo kale oo kaalmo lacageed ah ayaa diyaar u ah ardayda gudaha iyo kuwa caalamiga ah ee buuxiya shuruudaha. Kharashka waxbarashadu waa $57,638.
8. Jaamacadda Brown
Liiska kama dambaysta ah ee dugsiyada Ivy League waxa ku jira Jaamacadda Brown. Waxaa la aasaasay 1764 sidii machad sare oo cilmi baaris gaar ah oo ku taal Providence, Rhode Island, Mareykanka. Iyada oo loo marayo waxbarid hal-abuur leh iyo cilmi-baaris aasaasi ah, Brown wuxuu gacan ka geystaa horumarinta aqoonta dhammaan qaybaha waxbarashada.
Saamiga ardayga iyo kuliyada waa 7 ilaa 1, waxaa jira in ka badan 80 shahaadada jaamacadeed iyo 84 barnaamij oo qalinjabiyeyaal ah oo gaaraya ilaa 2,477 koorso oo ardaydu ay ka dooran karaan ama ay abuuri karaan barnaamijkooda. Shahaado, aan shahaado ahayn, iyo barnaamijyo laba shahaado ah ayaa sidoo kale la bixiyaa. Waxa jira waddooyin shaqo oo ballaadhan oo aad adigu ka dooran karto. Ardayda, hadday ku jiraan barnaamijka shahaadada koowaad ama qalin-jabinta, ee muujiya baahida dhaqaale waxay haystaan ​​fursadda gargaarka maaliyadeed.
Kharashka waxbarashada ee Jaamacadda Brown waa $588,404.
Kani waa liiska dugsiyada Ivy League, oo si buuxda looga hadlay, iyo xidhiidhada codsiga ee lagu siiyay si aad wax badan uga barato shuruudaha barnaamijka gaarka ah.
Stanford ivy league ma yahay?
Stanford kuma jiro liiska dugsiyada Ivy League
Qof kasta oo buuxiya shuruudaha gelitaanka mid ka mid ah dugsiyada Ivy League waa la aqbali karaa si uu u sii wado barnaamijka uu doorto.
Ma jiraan iskuulo Ivy League ah oo ku yaal New York?
Jaamacadda Princeton, Jaamacadda Columbia, Jaamacadda Brown, iyo Jaamacadda Dartmouth waxay ku jiraan liiska dugsiyada Ivy League ee New York.
Ma jiraan iskuulo Ivy League ah oo ku yaal Hindiya?
Dugsiyada Ivy League ee Maraykanka isku mid maaha kuwa Hindiya. Ivy League ee Hindiya waa IISc, JNU, iyo BHU.
Waa maxay sababta Stanford uusan u ahayn Ivy League?
Stanford ma aha machad Ivy League ah sababtoo ah maaha mid ka mid ah xubnaha. Erayga "Ivy League" waa horyaal ciyaaraha fudud oo ka kooban siddeedan dugsi, Stanfordna ma aha mid ka mid ah sababtoo ah waagii la abuurayay horyaalada, Jaamacadda Stanford kuma aysan fiicneyn ciyaaraha.
Kanada ma ka jiraan dugsiyo Ivy League ah?
Dugsiyada Canadian Ivy League waa Jaamacadda Toronto, Jaamacadda McGill, Jaamacadda British Columbia, iyo Jaamacadda Queens. Jaamacadahani waxay la siman yihiin sideedda dugsi ee Ivy League ee Maraykanka.
Jaamacadda Pennsylvania ma ivy league?
Jaamacadda Pennsylvania waxay ku jirtaa liiska dugsiyada Ivy League ee Maraykanka.
Jaamacadda Columbia ma ivy league?
Jaamacadda Columbia waa mid ka mid ah horyaalka ivy.
37 Koorsooyin Online ah oo Bilaash ah oo Ivy League ah oo leh Xiriirinta Codsiga Tooska ah
50 Harvard Koorsooyin Online ah oo Bilaash ah oo wata Shahaadooyin
Dugsiga Ganacsiga Harvard Online | Khidmadaha, Ogolaanshaha & Deeqda waxbarasho
10ka ugu sarreeya ee sida buuxda loo maalgeliyay Ph.D. Barnaamijyada Xiriirinta Codsiga
13 -ka Jaamacadood ee ugu sarreeya MS ee Sayniska Kombiyuutarka Adduunka
15 Yale Koorsooyin Online ah oo Bilaash ah oo loogu talagalay Ardayda iyo Xirfadleyda
Iskuulada Caafimaadka ee ugu Fiican Pennsylvania
liiska dugsiyada ivy league
Previous Post:Sida loo yareeyo Lacag bixinta Amaahda Ardayga
Post Next:10-ka Lacag ee Jaamacadaha Ireland ugu hooseeya ee Ardayda Caalamiga ah